के हो बिहीबार मोरङको आकाशमा देखिएको सेतो डल्लो ? (भिडियो) - Sidha News
के हो बिहीबार मोरङको आकाशमा देखिएको सेतो डल्लो ? (भिडियो)
मोरङ। बिहीबार मोरङ र सुनसरीबाट आकाशमा दिउँसै ताराजस्तो दृश्य देखिएको छ । आकाशमा हेर्दा उत्तर दिशातर्फ सजिलै देख्न सकिने त्यो दृश्य दिउँसो ३ बजेदेखि नै देखिएको हो । पहिला यस्तो बस्तु मोरङको सुनवर्शी तथा रंगेलीका स्थानीयले देखेर फोटोहरु सार्वजनिक गरेका थिए । सुनवर्शी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुकुमारी राईले सीएफएल बल्बजस्तो चम्किलो बस्तु आकाशमा देखिएको बताउनुभयो । आकाशमा टलक्क टल्किएको बस्तु देखिएपछि सबैले अचम्म मान्दै तस्बिर खिचेको उहाँले बताउनुभयो ।